[Ciyaar] Boson X - Diyaar ma u tahay inaad ordo? | Laga soo bilaabo Linux
[Ciyaar] Boson X - Diyaar ma u tahay inaad ordo?
cayriin | | Ciyaaraha
Markan waxaan isku aragnaa gudaha dardar-geliyaha walxaha (sida qariibka ah sida dhawaaqyadaas), oo aan go'aansanay inaan u orodno xawaare aan caadi aheyn, oo riixaya fal-celintayada iyo waqtiga falcelinta illaa xadka. Iyo waxaas oo dhan sayniska dartiis, waxaan u ordaynaa raadinta walxo cusub!
Haa, waxaan halkaan la joogaa ciyaar kale oo aan kugula taliyo. Ciyaar si caadi ah ugu socotaa nidaamka aan jecel nahay, taasna keligeed ayaa mudan in lala wadaago.
Hordhaca ka sokow, wax yar baan ku soo koobayaa, kani waa ciyaar balwad badan leh. Sababta
Fudud, kaliya 6 heer oo laga gudbo, mid walbana waxaan ku guuleysaneynaa abuurista mid ka mid ah walxaha la filayo (ha fileynin inay fududahay maxaa yeelay way yar yihiin: D). Waxaan qabsannaa fallaaraha ama isku-darka caadiga ah ee WASD, oo aan ugu boodayo dhankaas oo haddii aan ku sii adkeysano, boodku wuu sii dheeraanayaa.
Waa in la ogaadaa in aan ka helay interface-ka fudud laakiin hal-abuurka leh ee naloo soo bandhigay, sida ay tahay marka la ina tusayo dhibcaha.
Sidoo kale bogga rasmiga ah, waxaan ka helnaa a ugu sareeya internetka halkaas oo aad ugu tartami karto inaad noqoto "cilmi-baaraha ugu fiican".
Si aad ugaqeyb gasho, fure fure o markii aad natiijo yeelato, ku dheji naaneyskaaga iyo voila 😉
Waxaan si adag u aaminsanahay inaad ku raaxeysaneyso ciyaartan waqti fiican. Waxaan kugula talinayaa inaad waqti yar kubixiso, heer kasta oo ay sii kordhiso xiisaha iyo caqabada.
DownloadWebsaydh rasmi ah
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay, oo waxaan ku aqrinay faallooyinka. Waad sii wadi kartaa mise dib-u-eegistaada ayaa doqon kuu ah? 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » [Ciyaar] Boson X - Diyaar ma u tahay inaad ordo?
Waad ku mahadsantahay ciyaarta XD
Heer sare Hadda waxaan ka saari doonaa Flappy Bird oo ciyaartan ayaan dul saari doonaa.
looxyada buunbuuninta dijo
Isla marka aan furo, way xirmaysaa: /
haddii aan ka wado qunsulka waxaan helayaa qaladka soo socda:
Waan ka xunnahay, OpenGL 1.5 ayaa loo baahan yahay.
AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 aalad aan xidhnayn
Waxaan hayaa lint mint 16, 64 xoogaa
Waxaan u maleynayaa in Opengl uu ku rakibmay reexaanta
Sababtoo ah xawaarahayagu waa Intel 3000 oo isku dhafan?
Wax la mid ah qof kale ma ku dhacday?
Ku jawaab Marcos Hype
Ma aqaano haddii Linux Mint ay ku rakibtay si kama-dambays ah, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in kaarkaas fiidiyowga ah aanad waligood dhibaatooyin la kulmi doonin .. 😉
Halkan waxaan kaaga tagayaa casharro leh qaabab kala duwan oo loo rakibo opengl-ka Linux Mint, waxaan rajeynayaa inay kaa caawin doonto.
Fisikiste ahaan, ciyaartan waxay aniga ila tahay mid aad iigufiican !! Waad ku mahadsantahay inaad nala wadaagto sidoo kale waad ku mahadsantahay "Waxay ka timid hawada sare". Labaduba waa kuwo balwad leh
Waan ku faraxsanahay inaad jeceshahay iyaga! .. ..Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga ..: D .. ..haddii aan helo ciyaaro kale oo wanaagsan, waxaan balanqaadayaa inaan la wadaago .. runti waxaan horeyba u haystaa mid ka mid ah hanaanka fikirka .. 😉
Sidee loo rakibay? Marhore ayaan googlay oo isku dayay laakiin waxba: /
Ku jawaab Jeff
Waxaad si fudud ugala soo baxeysaa badhanka aan kaga tagay boostada .. ..waxaad fureysaa .. waxaadna kuleysaa fulin galkaas furi doona ciyaarta .. wax kale majiraan ..
Waano aad u fiican, aad ayaad u mahadsantahay. Sawirro wanaagsan.
Ku jawaab adiazc87
MultiTail: Eeg laba, seddex iyo in ka badan log waqtiga dhabta ah isla waqtigaas
VIVER waxaa iibsan kara LINE